कर्णालीको भोकमरी भोटका लागि सिर्जित हो – Health Post Nepal
२०७५ फागुन २९ गते १२:१५
जनस्वास्थ्य एवं पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती धेरैले सुनेको र चिनेको नाम हो । लामो समयदेखि यीनै विषयमा लेखेर, बोलेर र अनुसन्धानसमेत गरेर अभियान नै चलाउँदै आएकी डा. उप्रेतीसँग हेल्थपोस्टका लागि लक्ष्मी चौलागाईँले यी विषयमा केन्द्रीत भएर गरेको कुराकानी ।
जनस्वास्थ्यलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
जनस्वास्थ्य भन्नाले जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् । जनताको स्वास्थ्यको कुरा गर्नुपर्दा औषधि, डाक्टरलगायत विषय मात्र नभई अलिकति फराकिलोतवरले समग्र स्वास्थ्यबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, कसैलाई झाडापखाला लागेका बेला एन्टिबायोटिकले गर्ने उपचार स्वास्थ्य भयो, तर जनस्वास्थ्य भनेको त्यही झाडापखाला एकैसाथ सयजनामा लाग्यो भने के कारणले लाग्यो भन्ने मुद्दा उठाउनु जनस्वास्थ्य हो भनी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसमा एउटा कुनै व्यक्तिविशेषको स्वास्थ्य नभई कुनै एक विशेष समूह तथा समग्र देशकै स्वास्थ्यअवस्थालाई मुद्दा बनाइन्छ ।
महिला स्वास्थ्यबारे कुरा गर्नुपर्दा प्रसूतिसेवा मेरो लामो कार्यानुभव भएका कारण मैले गर्भपतन गराएर उपचारका लागि आउने गरेका धेरै महिलाबारे बुझ्ने अवसर पाएँ । त्यस्तो अवस्थाका कतिपय महिलालाई बचाउन सकियो भने कतिपयलाई सकिएन । त्यतिवेला मैलै असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराएर आउने महिलाको संख्या धेरै नै पाएको थिएँ । अस्पतालमै आएर पनि गर्भपतनका कारण मृत्यु हुने महिलाको संख्या अत्यधिक हुन थालेपश्चात् मलाई लाग्यो, नेपालमा त्यतिवेला गर्भपतनसेवालाई कानुनी मान्यता नदिएका कारण पनि धेरै महिलाको मृत्यु भएको हो ।
नेपालमा गर्भपतन सेवालाई सुरक्षित गराउनुकासाथै कानुनी मान्यता कसरी दिलाउने भन्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित रह्यो । त्यस विषयमा धेरै छलफल चलाउँदा धेरै साथीले गर्भपतन हिन्दू धर्मविरुद्ध भएका कारण पनि नेपालमा यो सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने जवाफ मैले पाएँ । त्यतिवेला म नयाँ–नयाँ जोसमा थिएँ । गर्भपतनलाई चाहिएका वेला गराउन सकिने बनाउन सकेको खण्डमा धेरै महिलालाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागि नै रह्यो । त्यसपश्चात् सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा म निरन्तर बोल्न तथा लेख्न लागिपरेँ । बिस्तारै विभिन्न अध्ययनले नेपालमा मातृमृत्युदरको मुख्य कारणका रूपमा असुरक्षित गर्भपतनलाई पुष्टि गरे । त्यससँगै सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पायो । त्यो मेरो जीवनको धेरै नै ठूलो सफलताका रूपमा रह्यो ।
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएमा नेपाली महिला देहव्यापारमा लाग्छन् भन्ने प्रकारको एकथरी व्यक्तिको कुरा आउँदाआउँदै पनि यसले कानुनी मान्यता पाउनमा सफलता मिल्यो । त्यो मैले जनस्वास्थ्यमा चालेको एउटा ठूलो कदम थियो ।
गर्भपतनले समाजमा विकृति ल्यायो भन्ने तर्क पनि छ नि ?
कतिपय किशोरीले असुरक्षित रूपमा यौनसम्पर्क राख्छन् र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको छ भन्नेखाले तर्क गर्छन् भने त्यसले विकृति ल्यायो भन्न सकिन्छ । उनीहरूलाई असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराएमा स्वास्थ्यमा नराम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नै छैन । यो एउटा मुद्दा पनि हो । जस्तै, एउटा लागुऔषध छ, मरफिन, त्यसलाई लागुऔषधका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने क्यान्सर भएका बिरामीलाई दुखाइ कम गर्ने औषधिका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसरी भन्नुपर्दा मरफिनलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । त्यसैले गर्भपतन सेवालाई पनि अवस्था हेरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सकेसम्म गर्भपतनको अवस्थामा पुग्नै नपरोस् भन्ने मेरो पनि मान्यता छ । तर, बलात्कारजस्ता प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरू हुँदा, परिवारनियोजनका साधनहरूको प्रयोग गर्दागर्दै पनि गर्भ रहँदा सुरक्षित गर्भपतनसेवाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा गर्भपतनसेवालाई कानुनी मान्यता दिएमा महिलाहरू देहव्यापारमा लाग्छन् भनी मलाई एकजना प्रतिष्ठित महिला सांसदले नै भनेकी थिइन् ।
प्रसूतीगृहमा कार्यरत हुँदा मैले आफ्नै आँखाअगाडि धेरै महिलाको असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्यु देखेकी थिएँ । त्यसवेलादेखि नै मैले सुरक्षित गर्भपतनसेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउनुका साथै सस्तो बनाइनुपर्छ भन्दै विभिन्न मुद्दा उठाइरहेँ । मेरो जनस्वास्थ्यमा पहिलो कदम नै त्यहीँबाट सुरुवात भएको थियो । जनस्वास्थ्य र उपचारका कुराहरू एकअर्कामा एकदमै सम्बन्धित विषय हुन् ।
जुन नेता तथा राजनीतिक दलले बढी चामल वितरण गर्न सक्यो, दुर्गम क्षेत्रका जनताको भोट उसैले पाउने अवस्था सिर्जना भयो । भोट पाउनकै लागि नभएको भोकमरीको समस्यालाई नेताले नै भोकमरीमा परिणत गरिदिएका हुन् । कर्णालीमा कहाँ भोकमरीको समस्या छ ? म त्यहाँ धेरैपटक गएकी छु, स्थानीय खाद्यान्नलाई प्रयोग गर्ने हो भने कर्णालीका कुनै पनि ठाउँमा भोकमरी छैन । त्यहाँ आलु, सिमी, कोदो, फापरजस्ता पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध छन् । भोकमरीको समस्या त नेताले कृत्रिम रूपमा बनाएका हुन् । यो नितान्त हल्ला मात्रै हो । चामलसँग भोट साट्ने प्रवृत्ति भएका कारण नेपालमा भोकमरीको हल्ला फिँजाइएको हो । वास्तविक भोकमरी त यमनमा छ, अफगानिस्तानका कतिपय गाउँमा छ, सुडानमा छ ।
महिला स्वास्थ्यका अतिरिक्त जनस्वास्थ्यभित्र के–के कुरा समावेश हुन्छन् ?
जनस्वास्थ्य भनेको एकदमै फराकिलो अवधारणा हो । आमसञ्चारसँग कुरा गर्नु, एउटा इन्जिनियरले राम्रो सडक बनाइदिनु, मानसिक तनाव कम गर्नका लागि गीत तथा भजन सुन्नुजस्ता कुराहरू पनि जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । जनस्वास्थ्यको सम्बन्ध प्रायः सम्पूर्ण क्षेत्रसँग गाँसिएको हुन्छ ।
जाडोका वेला कागतीपानी खानेदेखि लिएर बिरामी हुँदा आराम गर्नेसम्म सबै कुरा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । जीवनका हरेक पक्ष जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय खाद्यान्न, पोषण, जंकफुडविरुद्धको अभियानमा हुनुहुन्छ नि ! अभियानलाई के–कसरी सफल बनाउने योजना छ ?
मेरो एजेन्डा यी विषय हुन्, तर यसमा म सफल हुन्छु कि हुन्न, मलाई थाहा छैन । मैले गाउँ–गाउँमा यस्ता अभियान लिएर जानुको प्रमुख उद्देश्य गाउँ–गाउँमै उपलब्ध खाद्यान्नलाई बढावा दिनु पनि हो, जुन मानव स्वास्थ्यका लागि पनि एकदमै हितकर छ ।हाल नेपालमा किशोरकिशोरीमा पनि मधुमेह, उच्च रक्तचापजस्ता समस्या देखापर्न थालेका छन् । किशोरकिशोरीमा यस्ता समस्या देखिनुका धेरै कारणमध्ये जंकफुड पनि एक हो । जंकफुडलाई लामो समयसम्म टिकाउन त्यसमा नुन तथा चिनीको मात्रा अत्यधिक राखिएको हुन्छ । जब शरीरमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ, त्यसले मधुमेह गराउँछ भने नुनको मात्रा बढी भएका त्यसले मिर्गौलामा समस्या देखापर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पनि व्यस्तताका कारण जंकफुडको बढी प्रयोग गर्ने भएकाले लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका युवामा पनि मिर्गौलाको समस्या धेरै नै देखिने गरेको छ । विदेशबाट ल्याएको पैसा सबै उपचारमै खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले बेरोजगारी पनि जनस्वास्थ्यको एउटा मुद्दा हो ।
तपाईं कोदो, मकैलगायत परम्परागत अन्नबालीहरूको प्रयोगलाई बढावा दिनुहुन्छ । पछिल्लो समय त्यस्ता खाद्यान्नको प्रयोग उत्पादनका दृष्टिले पनि सम्भव छ र ?
त्यस्ता खाद्यान्नको उत्पादन कम हुन्छ भनेर गरिने अध्ययन पनि त जनस्वास्थ्यको एउटा मुद्दा हो नि ! मानिसले उत्पादन नगरेकै कारण त ती खाद्यान्न बजारबाट लोप हुँदै जाने अवस्थामा पुगेका हुन् नि !
भोट पाउनकै लागि नभएको भोकमरीको समस्यालाई नेताले नै भोकमरीमा परिणत गरिदिएका हुन् । कर्णालीमा कहाँ भोकमरीको समस्या छ ? म त्यहाँ धेरैपटक गएकी छु, स्थानीय खाद्यान्नलाई प्रयोग गर्ने हो भने कर्णालीका कुनै पनि ठाउँमा भोकमरी छैन । त्यहाँ आलु, सिमी, कोदो, फापरजस्ता पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध छन् । भोकमरीको समस्या त नेताले कृत्रिम रूपमा बनाएका हुन् । यो नितान्त हल्ला मात्रै हो । चामलसँग भोट साट्ने प्रवृत्ति भएका कारण नेपालमा भोकमरीको हल्ला फिँजाइएको हो । वास्तविक भोकमरी त यमनमा छ, अफगानिस्तानका कतिपय गाउँमा छ, सुडानमा छ ।
पछिल्लो समय नेपालीको पोषणको अवस्थामा केही सुधार हुँदै गएको छ । स्वदेशमै उत्पादित खानेकुरालाई बढावा दिने हो भने नेपालीलाई कुपोषण हुनुपर्ने अवस्थै छैन । तर, गर्भवती नेपाली महिलामा सन् २००६ मा भन्दा रक्तअल्पता झन् बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले कहीँ न कहीँ समस्या भने छ ।
सहरी बसाइमा कोदो, फापरजस्ता खाद्यान्नको प्रयोग कत्तिको सम्भव छ ?
एकदमै सम्भव छ । म आफैँ पनि हप्ताको ३ पटकसम्म यस्ता खाद्यान्नको सेवन गर्छु । यस्ता खाद्यान्न पकाउन पनि धेरै नै सजिला छन् । यसलाई अन्य खाद्यान्नसँग मिलाएर पनि पकाउन सकिन्छ । असम्भव भन्ने छँदै छैन । पहिले–पहिले कोदो तथा फापरजस्ता खानेकुरालाई कुअन्न हुन्, गरिबले मात्र खाने अन्न हुन् भन्ने गलत धारणा थियो । अहिले ठूला–ठूला डिपार्टभेन्टल स्टोरहरूमा यस्ता खाद्यान्न किन्नेको भिड लाग्ने गरेको छ । उच्च आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिहरू हाल डायबिटिज, सुगरजस्ता समस्याले पीडित भएका कारण उनीहरूको रोजाइमा यस्ता खाद्यान्न पर्ने गरेका छन् । कोदो, फापरजस्ता खाद्यान्नमा हुने रेसादार पदार्थ मधुमेहपीडितका लागि स्वस्थकर खानेकुरा मानिन्छन् ।
कर्णालीका मानिसले कोदो, फापरजस्ता खाद्यान्नको प्रयोग नगर्नु तर काठमाडौंका मानिसले भने यसको प्रयोग गर्नु पनि त जनस्वास्थ्यको एउटा मुद्दा हो नि ! त्यस्तै, सेतो अस्वस्थकर चामल कर्णालीका मानिसलाई वितरण गर्नु पनि जनस्वास्थ्यको एक एउटा मुद्दा हो । पोषणतत्वका हिसाबले सेतो चामलमा पोषणको अवस्था शून्य हुन्छ । यसको विकल्पका रूपमा ब्राउन राइसको प्रयोग भने गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा प्रचलनमा रहेको दाल, भात, दूध, दहीजस्ता खानेकुरा स्वास्थ्यका दृष्टिले एकदमै उपयुक्त खाना हुन् । यसलाई सजिलै बिर्सिएर तयारी अवस्थामा पाइने केक, चाउचाउजस्ता खानेकुराको प्रयोग व्यापक बन्दै गएको छ ।
चाउचाउ कम्पनीमा काम गर्ने एकजना इन्जिनियरसँगको भेटमा उनले आफ्नो घरमा चाउचाउ कहिल्यै लान नदिने बताएका थिए । उनका अनुसार चाउचाउ बनाउँदा प्रयोग हुने पिठो एकदमै कमसलखालको हुन्छ । चाउचाउ तयार गर्नेक्रममा एउटै तेलको प्रयोग बारम्बार गर्ने गरिन्छ भन्ने जानकारी मैले उनीमार्फत पाएकी थिएँ । त्यसमा पोषणको मात्रा नहुनु त छँदै छ, उल्टै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारको समस्या उत्पन्न गराउँछ । चाउचाउका विज्ञापन छ्याप्छ्याप्ती आउँछन्, भटमास, कोदो, मकै, फापरजस्ता खाद्यान्नको विज्ञापन कहीँ–कतै पनि आउँदैनन् नि ! जुन कुराको जति धेरै विज्ञापन आउँछ, त्यो त्यति नै काम नलाग्ने रहेछ भनेर स्पष्ट हुन म सर्वसाधारणमा अनुरोध गर्छु । राम्रो कुराको त विज्ञापन नै आवश्यक हुँदैन नि !
समग्र नेपालीको पोषणको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय नेपालीको पोषणको अवस्थामा केही सुधार हुँदै गएको छ । स्वदेशमै उत्पादित खानेकुरालाई बढावा दिने हो भने नेपालीलाई कुपोषण हुनुपर्ने अवस्थै छैन । तर, गर्भवती नेपाली महिलामा सन् २००६ मा भन्दा रक्तअल्पता झन् बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैले कहीँ न कहीँ समस्या भने छ । नेपाल सरकारले गर्भवती महिलालाई निरन्तर आइरनचक्की वितरण गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाली महिलामा भिटामिन बी१२ को कमी भएको पत्ता लगाइसकेको छ । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा भिटामिन बी१२ वितरण गर्ने योजना बनाएको छ, जुन एउटा मूर्खतापूर्ण कुरा हो । किनभने महिला स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि खालि औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन । कतिपय हाम्रा सांस्कृतिक पक्षहरू पनि स्वास्थ्यका लागि हितकर छन्, जस्तै, क्वाँटी खाने चलन, फलामको भाँडोमा पकाउने चलन । क्वाँटी खाने प्रचलनले रक्तअल्पता हटाउनमा एकदमै मद्दत गर्छ ।